मानवजातिको भविष्य कस्तो छ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) करेन (गः) काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ताहिटी तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मले माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुभेल वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
एकअर्काको चासो राख्ने मानवसमाज निर्माण गर्न येशूको मृत्युले कसरी सम्भव तुल्याएको छ?
मानिसहरूले दिनप्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति गर्दै जानेछन्‌ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। तर के तिनीहरूले एक आपसमा गहिरो चासो राख्ने मानवसमाजको निर्माण गर्न सक्नेछन्‌ त? छैनन्‌। यो संसार लोभ र स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको छ। तर ईश्वरले मानिसहरूका लागि एउटा राम्रो उद्देश्य राख्नु भएको छ।—२ पत्रुस ३:१३ पढ्नुहोस्।
भविष्यमा विश्वभरिका मानिसहरूले एकअर्कालाई साँच्चै माया गर्ने समय आउनेछ भनेर ईश्वरको वचनमा उल्लेख गरिएको छ।मानिसहरू कुनै डरत्रासमा बाँच्नुपर्ने छैन, तिनीहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनेछन्‌। साथै तिनीहरूलाई कसैले हानिनोक्सानी पुऱ्याउने छैन।—मीका ४:३, ४ पढ्नुहोस्।
स्वार्थी झुकावको अन्त कसरी गरिनेछ?
सुरुमा मानिसलाई सृष्टि गरिंदा तिनीहरूमा कुनै पनि स्वार्थी झुकाव थिएन। तर पहिलो मानव अनाज्ञाकारी भएकोले तिनले त्रुटिरहित जीवन गुमाउनु पऱ्यो। त्यसैले हामीमा पनि स्वार्थी झुकाव वंशानुगत रूपमा सऱ्यो। तर ईश्वरले येशूमार्फत मानिसहरूलाई फेरि त्रुटिरहित अवस्थामा पुऱ्याउनुहुनेछ।—रोमी ७:२१, २४, २५ पढ्नुहोस्।
ईश्वरको इच्छा अनुसारै येशूले फिरौतीको बलिदान दिनुभएर प्रथम मानिसको अनाज्ञाकारीताले ल्याएका असरहरूलाई अन्त गरिदिनुभएको छ। (रोमी ५:१९) यसरी येशूले मानिसजातिका लागि सुन्दर भविष्य सम्भव तुल्याइदिनुभयो। भविष्यमा यो सुन्दर पृथ्वीमा खराब काम गर्ने र स्वार्थी झुकाव भएका कोही पनि मानिस हुनेछैन।—भजन ३७:९-११ पढ्नुहोस्।
फिरौतीको बलिदान भनेको के हो? तपाईं यसबाट कस्तो लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ?